Hibada Caqligu Waa Mid Kooban Horumarkuna Waa Dadaalka!
Wednesday 14th July 2021 11:20:38 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Dadka Hamiga sare leh waa kuwo tiro yar oo kooban kuwaasi ayaana dunida wax ka bedela.
Thomas Adison oo ahaa ninkii soo saaray laambada laydhka wuxuu ahaa yaraantiisii wiil yar oo su’aalo badan. Thomas markii lagu daray dugsiga nasiib daro mudo badan kuma sii jirin dugsiga, Wax kasta oo loo soo dhigo waa uu iloobi jiray sidaa daraadeed waxa uu ahaa ardayga ugu hooseeya fasalka. Macalimiinta ayaa ka quustay waxaana ay ka soo qaadeen inuu yahay qof yar oo aan maskax ahaan dhamayn oo maraan ah.
Ardayda iyo macalimiintuba waxa ay u arkayeen saaqid. Markii muddo sidaa loogu dulqaadanayay maamulka dugsiga ayaa go’aan ku gaadhay in laga eryo dugsiga ka dib markii ay ku eedeeyen inu yahay mid maraan ah oo u baahan dugsiyada dadka qaba xanuunka naafada caqliga. Gurigooda ayuu tegay oo hooyadii gaadhay isagoo ilmaynaya oohinta darted.
Dadaalka ugu badan hooyadii ayaa u gashay oo wax bartay markii ay akhriday warqadii loo soo dhiibay waxa ku qoraa " Wiilkaagu waa maraan, aan waxbarashada la qabsan Karin, sidaa awgeed waan ka erinay dugsida” . Hooyadii ayaa u sheegtay inay iyadu guriga wax ku bari doonto oo aanu werwerin.
Markii uu toban sano gaadhay aabihii ayaa u keenay Buug cilmiga sayniska ah oo sebenkaasi la dhigan jiray. Waxaana u arkay guul madaama aqoontii saynis ee la gaadhay ku qorayd.
Waxa uu samayn jiray tijaaboyin kala duwan, isagoo lacagtiisa ku iibsan jiray kolba qalabka uu u baahdo. Qoyskooda oo sabool noqday awgeed wuxu goostay isagoo 12 sano jiray inuu shaqo ka dhigto jaraa’idka oo uu ku iibiyo Tareenka dhexdiisa. Ujeedada ugu weyni ee uu laha waxa ay ahayd inuu si fudud u helo wargeysyo uu ka akhristo hadba waxa cusub ee soo baxa. Tareenka dhexdiisana waxa uu ka samaystay shaybaadh gaar ah.
Tareenka ayaa maalin si lama filaan ah duqeeyay meel, waxaana wada daatay agabkii kala duwanaa ee uu ku kaydiyay kimikada uu tijbaada ku sameeyo. Maamulka Tareenka ayaa ka eryay tareenka iyagoo albaatiisana ku amray inuu ka gurto markii ay ka cadhoodeen kimikada aanay ogayn eek u dadaatay tareenka. Ninkaasi dhibtaasi ku dhacaysaa waa Thoams Adson oo ah ninka curiyay ee ikhtiraacay laambada laydhka meel kasta ka ifaysay dunida maanta. Waxa uu ahaa nin Maraykan ah oo noola 1847- 1931. Waxaana uu yidhi halku dhigga ah : "Hibadu caqligu waa 1%, laakiin 99% waxa uu qofku ku gaadha dadaalka uu la yimado horumarka”.
[Breaking News:-] Guddida Tacliinta Sare Oo Waqti Kooban U Qabatay 21 Jaamacadood Oo Dalka Ka Howlgala + Sababta.
[Akhriso:-] Rooble Oo Heshiis 10 Qodob Ka Kooban La Saxeexday Mucaaradka Farmaajo Ku Kacsan & Dareenada Ku Xeeran.
[Warbixin:-] Intuu Samirku Ka Qaataa Isbedelka Nolosha, Qoys Wakhti kooban Ay Isku Bedeshay Noloshoodii
Nuxurka Heshiis Ay Kala Saxeexdeen Dalalka Somaliland Iyo Taiwan + Muxuu Ka Kooban Yahay [ Sawiro ]
[Daawo:-] Xabsigii Labaad Ee Caasimada Hargaysa Oo Si Rasmiya Looo Dhagax Dhigay Iyo Qaybaha Uu Ka Kooban Yahay.
TARIIKH KOOBAN OO AH URURKII SNM WADANKA KU XORAYSAY
Dawladda Itoobiya Oo Si Kooban Uga Hadashay Isfahamka Diblomaasiyadeed Ee Somaliland Iyo Kenya
Dawladda Soomaaliya oo waqti kooban u Qabatay Diblomaasiyiinta Ka Jooga Magaalada Nairobi.
[DEG DEG:-] Ciidamada Puntland Oo Dib U La Wareegay Degaano Ku Yaala Gobolka Sanaag Oo Al-shabaab Maalmo Kooban Haysteen